Home ASIAN STARS Mile Jedinak Cartheel Story Sheekooyin Xaqiiqo Wadani ah
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubada cagta oo ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; "Rabshaduhu waa in laga cabsadaa". Sheekada Mile Jedinak Carhoodhood iyo xaqiiqda aan la isku qorin Xaqiiqooyinka sawirada ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo ah laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay sifooyinka hoggaankiisa balse qaar ka mid ah waxay tixgeliyaan Mile Jedinak's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Mile Jedinak Cartheel Story Sheekooyin Xaqiiqo Weedho -Nolosha Hore
Magaca dhabta ah waa Michael John Jedinak. Wuxuu ku dhashay on the 3rd ee bisha Agoosto ee 1984 Sydney, Australia. Michael wuxuu ka mid yahay xidigaha reer Croatia iyo naaneyska 'Mile' waa mid ka mid ah kuwa naaneyska ah ee leh nooc ka mid ah magaca rasmiga ah.
Mile wuxuu u kordhay sida ilmo yar oo ku yaalla xaafadaha galbeedka ee Rooty Hill, Sydney iyo waalidkiis iyo awoowe, walaalo iyo walaalo. Xaqiiqdii, haddii aad fahamto aagga, dadka dhulka ku hoos jira, wakhtiyada adag ee ay soo mareen, markaa waxaad si fiican u fahamsan tahay sida uu Mile Jedinak u sameeyay awood maskaxeed iyo go'aan ka gaarid oo uu ku guuleysto mid ka mid ah kubada cagta ee ugu weyn marxaladaha.
Jedinak mar uu soo xasuusto. "Waalidkeyga ayaa sidoo kale ku sugnaa aagga si aan u helno shabakad weyn oo qoys. Hooyo iyo aabbe ayaa si adag u shaqeeyay. Waxay u maleynayeen inay adag tahay, laakiin ma dhahayo waxay ahayd mid aad u xun. Waxyaaluhu waa, waxa ay heleen waxay ku shaqeeyeen si aad u adag. Dhibaato ma aysan imaan, waxaana filayaa in badan oo aan barbaariyadayda ku saleeyay shaqaynta waxa aad heli karto. Waxaan dib u eegayaa oo waxaan dhihi karaa in qiimahaasi korayo waa wax aan ku faanayo oo aan si weyn ugu mahadnaqayo waalidiintayda sida ay ii keeneen. "
Ilmo ahaan, Mile wuxuu ku biiray St Augustine Catholic High School ee Rooty Hill. Dugsiga dhexdiisa wuxuu ahaa koox kubada cagta ah. Waxa uu ku dhacay jacaylka ciyaarta oo wuxuu ka dhigay dareenkiisa iyo mustaqbalkiisa mustaqbalka. Intii lagu jiray iskuulka, Mile waxay ka qaybgaleen oo ay kooxdiisi ku soo qaadeen inay ku guuleystaan ​​tartamo dhowr ah. Waxa uu xusuusnayd waa PDSSSC, tartan kaas oo ka soo horjeesatay dhammaan dugsiyada Catholic ee Australia.
Ka dib markii uu dhalinyaradiisii ​​kordhay, Mile ayaa kubada cagta ku qaaday heerkii xigay markii uu la soo saxiixday Sydney United markii uu ku soo qaatay xirfadiisa ciyaareed. Mile ayaa ku biiray kooxdii ugu fiicnayd ee uu ku soo biiray kooxdooda. Si uu u helo waayo-aragnimo badan, wuxuu aaday Croatia (NK Varaždin), iyo Turkiga (Antalyaspor) oo ku aadan Loic ka hor inta uusan ugu dambeyn ka tagin Europe, halkaa kadibna uu noqday kabtanka Crystal Palace iyo qaranka. Sida oo kale Mark Viduka, kabtanimada dalkiisa macnaheedu waa adduunka isaga iyo inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh
Mile Jedinak Cartheel Story Sheekooyin Xaqiiqo Weedho -Nolosha Xiriirka
2010, Jedinak ayaa guursaday Natalie Peacock. Waxay ahaayeen kuwo xiriir la leh wakhti dheer waxayna leeyihiin xiriir weyn oo midba midka kale ah. Lamaanahan waxaa badanaa lagu arkaa dhacdooyin iyo hawlo kala duwan.
Xaaskiisa, Natalie Peacock waa model hore oo ka timid Sydney. Lammaane ayaa leh wiil magaciisu yahay Andre ka dib guurkooda 2010.
Mile Jedinak Cartheel Story Sheekooyin Xaqiiqo Weedho -Naftaada Shaqsiga
Mile wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda shakhsiyadiisa.
Mile Jedinak Xoogagga: Isagu waa hal-abuurnimo, sharaf leh, deeqsinimo leh, diirran, diirran, sharaf leh.
Mile Jedinak Quakin: Waqti yar gudaheeda, Mile waxay noqon kartaa mid is-dul-qaad ah oo madax adag.
Maxaa Mile Jedinak jecel yahay: Run ahaantii, wuxuu jecel yahay inuu qaato fasaxyada iyo inuu la sheekeysto asxaabta.
Waa maxay Mile Jedinak: In la iska indho tiro, xaqiiqda dhabta ah, maaha in loola dhaqmo sida boqorka ama kabtanka.
Mile, Mile Jedinak waa hoggaamiye dabiici ah oo dhashay. Waxa uu yahay riwaayad, hal-abuurnimo, is-kalsoonaan iyo awood badan.
Waxa uu awoodaa inuu ku guuleysto wax kasta oo uu doonayo inuu ku noolaado meel kasta oo nolosha ah oo uu naftiisa ku galo. Shaki la'aan, waxaa jira xoog gaar ah Mile iyo "boqorka boqorka".
Mile Jedinak Cartheel Story Sheekooyin Xaqiiqo Weedho -Nolosha Qoyska
Michael John wuxuu ka yimid asal weyn oo qaran oo ka kooban asxaab badan iyo walaalo. Waxay ahayd awoowayaashii markii hore ka soo guuray Croatia ilaa Australia intii lagu jiray Dagaalkii Bariga Afrika oo qeyb ka ahaa dagaalkii labaad ee aduunka.
Hooyo iyo aabbe oo ka mid ah dhaxalka Croatia waxay u yimaadeen Sydney sida caruurta oo ay u koray awoowayaashood kuwaas oo aan dhab ahaantii ku hadlin Ingiriis badan. Sida dad badan oo ka hor iyo ka dib, waxay is guursadeen, iibsadeen gurigoodii ugu horeeyay waxayna arkeen qoyskooda ballaaran.
Mile waxay ka timaadaa qoys leh qiimayaal muhiim ah. Dhinaca dhabta ah ee shaqooyinka soo-galootiga caadiga ah iyo habdhaqanka qoyska, waalidka Mile Jedinak waxay gacan ka geysteen inay dhistaan ​​qiimaha saxda ah ee carruurtooda, Mile gaar ahaan. Maanta, Miles waxa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ka dhaxlay qiimaha qiimaha qoyskiisa taas oo loo arko sida uu u hoggaamiyo Socceroos sida Tim Cahill, Harry Kewell iyo Lucas Neill horey u qabtay.
Mile Jedinak Cartheel Story Sheekooyin Xaqiiqo Weedho -Sheekadu waxay ku xiran tahay magaciisa
Mile Jedinak ayaa shaaca ka qaaday in magaciisa dhabta ah uu yahay Michael - laakiin waa la soo koobay sababtoo ah dhaxalka dhaxalsiisa ee Croatia. Jedinak ayaa noqday taageerayaasha 'jecel' intii lagu jiray xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay ee Aston Villa, waxaana lagu naaneystey 'Dhiigga waa in laga cabsadaa' by Villa Park aamin ah.
Qofka Australiya wuxuu ku dhashay Sydney laakiin wuxuu ka yimid qoys reer Croatia ah. Wuxuu ku soo gaabiyaa magaciisa, Mile - wuxuu igu magacaabay Me Lay.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta Sheekada Mile Jedinak Caruurta iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Crystal Palace Taariikhda Kubada Cagta
Aaron Wan-Bissaka Storyhood Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Andros Townsend Storyhood Story Sheeko Xaqiiqda Wada-hadal aan la isku qorin
Gareth Southgate Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Emmanuel Adebayor Storyhood Story Plus Xogta Warka Xadidan
Christian Benteke Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
YURUB IYO YURUB325
Waxaa laga yaabaa 19, 2018